Umkhondo omxinwa uHultsfred-Västervik. Amava ohambo kaloliwe ukusuka kwixesha elidlulileyo!
ekhaya » Bona kwaye wenze » Imisebenzi » Umkhondo omxinwa uHultsfred-Västervik
I-7 yeekhilomitha ubude kunye ne-891 yeemilimitha ububanzi, isuka kumahlathi aseSmåland entshona, amachibi adlulileyo, uluntu oluncinci kunye nezolimo ukuya kwilizwe leziqithi elisempuma. Ukusukela ngeminyaka yoo-1950, iibhasi zikaloliwe etyheli naorenji ziye zanyikima kuloliwe omxinwa. Oololiwe bahamba yonke imihla kuloliwe odwelisiweyo ehlotyeni. Amava ohambo ngololiwe ukusuka kwixesha elidlulileyo-gukhenketho kuyo yonke indlela okanye uhambe umgama omfutshane!
Kwiibhasi zikaloliwe kukho ukusebenza okulula apho ungathenga khona ikofu, iziselo ezihlwahlwazayo kunye namashwamshwam alula.
Ukuthengwa kwamatikiti: Unokuthenga amatikiti ngqo ebhodini koololiwe. Intlawulo yekhadi ayinakwenzeka ebhodini koololiwe. Kuyenzeka ukuba uhlawule ngekhadi kwiziko lohambo le-KLT eVästervik nakwisikhululo saseVerkebäck.
Umqhubi, isitulo esinamavili kunye nokuhambahamba: Isitulo esinamavili, isitulo esinamavili kunye nokuhambahamba kunokuziswa simahla. Koololiwe beebhasi zikaloliwe, iiprem azinakubekwa kwigumbi kodwa zibekwe kwigumbi levaranda ngokwemiyalelo yabasebenzi bakaloliwe.
Ibhayisekile: Iibhayisikile zibandakanyiwe ngokuxhomekeke kubukho. Ukuba uneqela ngebhayisekile, sicebisa ukubhukisha kwangaphambili kusuku olungaphambi kokuhamba ngomnxeba 0490-230 10. Iibhayisikile zixabisa i-SEK 40 ngaphandle komgama.
Isilwanyana: Izinja kunye nezinye izilwanyana zasekhaya zingakhapha umhambi ohlawulayo simahla.
577 34 IHultfred, Sverige
2 uphononongo kuGoogle